3. Maung Nout Lite Khae Mal Intro - Gay Gay
1. Cash back 10000Kyat if buy above 200000 kyat - MH mobile
1. ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ရက်နေ့အတွက် ၇ရက်သားသမီးဗေဒင်
2. ခြေဖနောင့်အက်နေတာတွေပျောက်ကင်းပြီး လှပတဲ့ခြေဖဝါးလေးရရှိစေမယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ
3. ဒီ(၇)ချက်ကို လိုက်နာမယ်ဆိုရင် သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ
1. Park Hae-jin ကို သက်ရောက်မှုမရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း။
2. (Movie Review) ‘Man of Will’ – တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့သူရဲကောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့ Kim Koo ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား
3. စက်တင်ဘာလ (29) ရက်နေ့မှာ လက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ Lee Gong-gun နဲ့ Jo Yoon-hee
1. လေယာဉ်ပျံ - အစ/အဆုံး
2. အဲဒီနေ့က ကျွန်တော် အရပ်ပိုမြင့်နေခဲ့တယ် - အစ/အဆုံး
3. ချစ်-ကြည့် - အစ/အဆုံး
1. မိန်းကလေးတွေက အချစ်စစ်ကိုပိုပြီမြတ်နိုးကြတာမှန်ရဲ့လား
2. ဝက်ခြံနဲ့ အမည်းစက်တွေကို လျော့နည်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ခင်ဗျာ
၂၀၁၇ သီတင်းကျွတ် ဒိုင်ယာရီ
ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်တွေမှာ ဘယ်လိုပျော်စရာတွေရှိခဲ့လဲ ဘယ်တွေကို အများစုလည်ပတ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်သတင်းကျွတ်တရားဝင် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ကတော့ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့မှစပေမဲ့ တစ်ချိူ့သူတွေကတော့ ရုံးဖွင့်ရက်ဖြစ်နေခဲ့သေးတဲ့ အောက်တိုဘာ ၂ ရက် ၃ ရက်ကိုပါ ခွင့်ယူလိုက်ကြပြီး တစ်ဆက်တည်း ပိတ်ရက်ရှည် (၉) ရက်ကို ယူလိုက်ကြပါတော့တယ်။
ဒါနဲ့စကားမစပ် နောက်လ နိုဝင်ဘာမှာ တန်ဆောင်တိုင်အတွက် အစိုးရပိတ်ရက်ကတော့ ၂ရက်နေ့ (ကြာသပတေး) နှင့် ၃ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) ကျတယ်ဆိုတော့ ခွင့်မယူရင် ပိတ်ရက်ရှည် ၄ ရက်ရမှာဖြစ်ပြီး ရှေ့မှာရှိတဲ့ တနင်္လာ၊ အဂါင်္၊ ဗုဒ္ဓဟူး ပါခွင့်ယူရဲမယ်ဆိုရင်တော့ ပိတ်ရက်ရှည် ၉ ရက်ကြီးများတောင် ထပ်ရမှာနော်။ (ဒါကတော့ ကိုယ့်အထက်လူကြီးကိုပိုင်ရင်လုပ်ကြပေါ့လေ.. ဟိဟိ)
ကဲ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်မှာ ဘာပွဲတွေရှိခဲ့တယ်၊ လူအများစုဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ် ဘယ်တွေသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလဲ တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။
- အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေ နှင့် အလည်ပတ်ခရီးသွားသူတွေ
တစ်ချိူ့ သူတွေက ဘယ်သွားသွား လူတွေကြပ်မှာစိုးတယ်ဆိုပြီး အိမ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေ မီးထွန်း၊ မီးပုံးပျံလွှတ်၊ မီးပန်းလေးတွေကစားပြီး အနားယူကြလေရဲ့။ ညဖက်ကျ မိသားစုနဲ့တူတူ ဆီမီးလေးထွန်းပြီး မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်၊ မီးပုံးပျံလွှတ်ပြီးလိုရာဆုကိုတောင်းကြတဲ့သူတွေပေါ့။
တစ်ချိူ့ကတော့ ပိတ်ရက်လေးရတုန်း ခရီးလေးအပြေးသွားကြလေရဲ့။
- သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်အသွားအများဆုံး ခရီးစဉ်တွေ
ဒီနှစ်အတွက် အရမ်းကို ဟော့ဖြစ်တဲ့ အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြတဲ့ ခရီးစဉ်တွေကတော့ ပုဂံ၊ ကျိူက်ထီးရိုး၊ တောင်ကြီး၊ အင်လေး၊ ချောင်းသာ နှင့် ငွေဆောင် အစရှိတဲ့ကမ်းခြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိတ်ရက်မှာ အသွားအများဆုံးကတော့ ပုဂံပါပဲ။ ၃ ပတ်တိတိကြိုပြီး Hotel Booking လုပ်တာတောင်မရတော့တဲ့အထိပါပဲ။
ပိတ်ရက်ကာလပုဂံမှာတော့ main လမ်းမကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ညောင်ဦး-ပုဂံမြို့သစ်လမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းတွေမှာပါ ကားတွေလုံးဝ ရွေ့မရအောင် စည်ကားခဲ့ပါတယ်။
ကျိူက်ထီးရိုးကတော့ တောင်ပေါ်ရော တောင်အောက်ပါ တိုးမပေါက်အောင် လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့အတွက် စံချိန်တင်လောက်အောင်ကြပ်တယ်လို့တောင်ပြောစမှတ်ပြုကြလေရဲ့။
- သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက် ရန်ကုန်နှင့် နယ်တစ်ချိူ့ မှာရှိတဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ
သီတင်းကျွတ်ရောက်တော့မယ်ဟေ့ပြောလိုက်ရင် ရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူအတော်များများက သီတင်းကျွတ်နှင့်အတူ ရန်ကုန်တိုင်း ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာကျင်းပတဲ့ ရေကျော်ပွဲဈေးကို တစ်ဆက်တည်းတွဲမြင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ ရေကျော်ပွဲဈေးကိုတော့ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ကနေ ၆ ရက်နေ့ထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာမုန့်မျိူးစုံ ဘယ်လောက်တောင်စည်ကားသလဲဆိုရင် ပုံတွေသာကြည့်တော့ဗျာ။
- ဗိုလ်ချူပ်လမ်း Junction City ရှေ့
ဗိုလ်ချူပ်လမ်း တောက်လျှောက်ကို ချစ်စရာ ရောင်စုံမီးတွေထွန်းထားတဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ဈေးနှင့် Junction city နားကိုတော့ လှလွန်းလို့ မရောက်ခဲ့သူမရှိသလောက်ပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
- လပြည့်နေ့ည Iron Cross Live show
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တုန်းကလဲ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ Iron Cross ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ခဲ့သေးတယ်တဲ့ဗျာ။
- YGN Thadinkyut Festival @ ကန်တော်ကြီး
နောက်ထပ်ပွဲတစ်ခုကတော့ ရန်ကုန်ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး MPT က Sponsor လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ “YGN Thadinkyut Festival” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာတော့ လိုရာဆုကိုတောင်းပြီး မီးပုံးလှလှလေးတွေကို ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကန်ရေပြင်ကြီးထဲ လွှတ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့ပွဲလေးပါ။
- ရွှေကျင် မီးမျှောပွဲ
ပဲခူးတိုင်း၊ ရွှေကျင်မြို့မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့နှင့် လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့တွေမှာ အစဉ်လာမပျက် ကျင်းပလေ့ (၁၆၆) ကြိမ်မြောက် ရွှေကျင်မီးမျှောပွဲ နှင့် ရှင်ဥပဂုတ္ထ မထေရ်မြတ် ပူဇော်ပွဲ မှာလဲ အလွန်ပဲ စည်ကားသိုက်မြိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
- ဖားစည်မြေည မီးမျှောပွဲ
နယ်ဖက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မီးမျှောပွဲလေးလဲရှိသေးသဗျ။ အဲ့ဒါကတော့ ကရင်ပြည်နယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ဖားစည်မြေညဆိုတဲ့ မီးမျှောပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ အောက်တိုဘာ ၄၊ ၅၊ ၆ သုံးရက်ဆက်တိုက်ကျင်းပခဲ့တာပါ။
ကဲ သတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်တွေမှာ သင်ရော ဘယ်မှာရှိခဲ့သလဲ ဘယ်လိုပျော်ရွှင်ခဲ့သလဲ?
ခရီးသွားသူဖြစ်ဖြစ် လျှောက်လည်သူဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာနေသူဖြစ်ဖြစ်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ပျော်ရွှင်စရာသီတင်းကျွတ်ကာလလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ပျိုရွယ်သူတို့အတွက် ချစ်ရေးချစ်ရာ ဘ၀တွက်တာဗေဒင်
၇၁ နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ (လိုတရ အထူးဆောင်းပါး)
ရထားမောင်းသူ နှလုံးရောဂါဖောက်ပြီး ရထားတိမ်းမှောက်ခဲ့ရတဲ့ ရေတံခွန်ဘူတာဖြစ်စဉ်(Jan 31)
ဇန်န၀ါရီ ၂၄ရက်မှ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်း အထူးနေ့ရက်နှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ချို့